बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासको लाखौं रकम फ्रिज :: Setopati
सन्तोष न्यौपाने बेल्जियम, असोज १८
बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासको लाखौं रकम फ्रिज भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजित बजेट मध्ये ३३ लाख ३ हजार १ सय ७९ रूपैयाँ २८ पैसा फ्रिज भएको हो। नेपाल सरकारले दूतावासलाई ६ करोड ६८ लाख ७८ हजार नेपाली रूपैयाँ बजेट पठाएको थियो। जसमध्ये दूतावासले ६ करोड ३५ लाख ७४ हजार ८ सय २० रूपैयाँ ७२ पैसा मात्र खर्च गरेको छ।
बेल्जियमस्थित नेपाली दूतावासले दिएको डाटा अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट सेवा शुल्कको शीर्षकमा विनियोजित गरिएको देखाएको छ। जसमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ।
डाटा अनुसार यसमा ९ लाख १५ हजार ८ सय ६ रुपैयाँ फ्रिज भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो बढी रकम घर भाडाको लागि छुट्याइएको १ करोड ३६ लाख रूपैयाँ मध्ये ३९ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
तेस्रो बढी रकम अन्य भत्ता शीर्षकमा १ करोड २७ लाख रकम मध्ये ६२ हजार २३७ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। त्यस्तै गरेर तलब रकम बजेटको निकै कम रहेको दूतावासको डाटाले देखाएको छ।
जसमा १७ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ भने यसमा पनि ३९ हजार ९१३ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ। विगत ९ महिनादेखि नेपाली दूतावास बेल्जियममा तृतीय सचिवको पद खाली छ।
अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने औषधि उपचारको लागि मात्रै भनेर गत आर्थिक वर्षमा ८५ लाख रकम सरकारले छुट्याएको मध्ये ८० लाख २२ हजार २ सय ७ रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। बाँकी रकम फ्रिज भएको डाटाले देखाएको छ। यो रकम बेल्जियममा उपचार खर्च मध्ये निकै उच्च रहेको देखिन्छ।
त्यस्तै गरेर पानी बिजुलीको लागि ३५ लाख रुपैयाँ मध्ये २५ लाख ४१ हजार ५ सय ७७ रूपैयाँ खर्च भएको छ। सञ्चार महसुल तर्फ १६ लाख मध्ये १ हजार ७५ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ। दूतावास बेल्जियमले बेलाबेलामा कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ। तर उक्त कार्यक्रम गर्न भनेर आएको २९ लाख रूपैयाँ मध्ये ८९ हजार २ सय १५ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ। फ्रिज भयको सबै रकम दूतावासले नेपाल नै पठाउनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा आउँदो आवको निश्चित समयभित्र खर्च गराउने व्यवस्था रहेको छ।
दूतावासले खर्चको तुलनामा आम्दानी कम गरेको छ। दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार राजस्वबाट गत आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८८ लाख ८१ हजार ७ सय ४३ रूपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। यो रकम आर्थिक वर्ष ७३/७३ भन्दा बढी देखिन्छ ।
जसमा आ.व. २०७२/७३ को राज्वश्व प्राप्ति रु ३ करोड ५० लाख १३ हजार ९३४ रहेको थियो। तथा उक्त आर्थिक वर्षमा बेल्जियम दूतावासले ५ करोड ८२ लाख ३५ हजार २७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। जुन ७४/७५ भन्दा निकै कम देखिन्छ।
दूतावासको सूचना अनुसार आर्थिक वर्ष ७२/७३ मा तलव तथा अन्य भत्तामा १४,३१४,६३३।४८ , अफिस युटिलिटिज खर्चअन्तर्गत ६,९६४,०४४।१४,कार्यालय सम्बन्धी खर्च २,१२३,१०८।८०, अन्य सेवा शुल्क १०,२९३,६७८।४०, औषधोपचार तथा विमा (गाडी, निवास तथा स्वास्थ्य) ९,२४८,४२६।५१, सञ्चालन तथा मर्मत संभार १,०९२,२५५।३७, र विविध मा ,७१०,३१५।८९ गरेर जम्मा ५६,७४६,४६२।५९ खर्च भयको थियो | उक्त आर्थिक वर्षमा पनि बाँकी रकम खर्च नभए फ्रिज भएको थियो।
त्यसो त बेल्जियम दूतावास मात्रै होइन नेपाली दूतावास डेनमार्कमा पनि उस्तै बजेट फ्रिज भएर नेपाल फिर्ता भएको छ।
दूतावास डेनमार्कका अनुसार आ.ब. २०७४/७५ मा कार्यक्रम खर्चको लागि १७ लाख रकम विनियोजित भएको मध्ये १ लाख ४५ हजार १ सय २३ रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
दूतावासले बाँकी खर्च विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज १८, २०७५, ०९:४१:००